Tantaran’ny mpampianatra iray ao Gaziantep, tanànan’ireo Siriana mpitsoa-ponenana ao Tiorkia · Global Voices teny Malagasy
MpanoratraNicoletta de Vita
Voadika ny 05 Aogositra 2019 2:49 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Deutsch, English, Español, Ελληνικά, Italiano
80 kilaometatra miala amin'ireo ady, 100 kilaometatra miala an'i Kobane (ilay tanàna Kiorda voababo, avy eo afaka tamin'ny ziogan'ny fanjakana Islamika) ary 60 kilaometatra miala ny sisintany siriana, Gaziantep [teny frantsay] no tanàna Eoropeana farany alohan'ny hidirana ny Afovoany-Atsinananat. Ity renivohitra Tiorka ity, miorina somary any atsimo, dia fivondronan'ireo finoana, ireo fomban-drazana, ny maoderina ary ireo fifanoherana, eo anelanelan'ny Afovoany-Atsinanan sy Eoropa.
Fa misy ampahany kely amin'ny vahoaka miasa amina ONG iray, ny GEGD (Gaziantep Eğitim ve Gençlik Dernegi) [teny tiorka] no mandray an-tànana, manabe ary mitaiza ireo ankizy manana fiaviana siriàna sy afgàna. Nitsidika io ivontoerana io aho, noho ny fiofanana iray nokarakaraina fikambanana tiorka iray miahy ny fampiatiana ara-kolontsaina ao Gaziantep, niarahana niasa tamin'ny Fiombonambe Eoropeàna. Mitovitovy amin'ny trano heva ny birao foiben'ilay fikambanana, misy zaridaina sy kilalao sangodina vitsivitsy, saingy dia ivontoerana iray io, ahitàna olona manana zompirenena folo raha kely indrindra sy kolontsaina isankarazany miaraka miaina, mifampiresaka ary miaraka mianatra.
Ady & Fifandirana 4 andro izay